Ukugcina i-Dime ukuchitha idola | Martech Zone
NgoMvulo, Matshi 3, 2008 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Phezolo ndibukele ukuqala (kodwa ndaphoswa kokunye) komboniso weOprah's Big Give. Ndiyithandile le ndawo yokubonelela- bonelela umntu nge-2,500 XNUMX yeedola kwaye umntu owenza owona msebenzi mhle ekukhuliseni eyona mali iphumeleleyo.
Isiseko somboniso yayikukuba kufuneka uye kudibana nomntu okanye abantu obancedayo. Ngenxa yoko, uxinzelelo yayingelilo nje ukwenza-yayingekuko ukubavumela abantu ukuba ubekhona ukuza kunceda.
Into endiyifundileyo njengokulandela kukuba i-2,500 yeedola yayingabalulekanga. I-2,500 yeedola yayikukukwenza ungakhathazeki ngezothutho, iminxeba, umbutho, njl njl. Ukuba ujonge ikakhulu kwaye uza kuyichitha phi i-2,500 yeedola ukuze ucofe eyona ininzi kuyo, uyalahleka. Ukuba, endaweni yoko, uyayityeshela i-2,500 XNUMX yeedola kwaye ugxile kwimali enkulu-usendleleni!
Ukufana kum kukutyalomali esikwenzayo emsebenzini wethu. Ukuba unayo imithombo yezemali, ukukhathazeka malunga nokuba ungasindisa malini xa uthenga isiqwenga sezixhobo zeofisi kunokuba sisidenge. Umzekelo: Ke unomqeshwa owenza i $ 30 / hr osebenza ngexabiso elingama- $ 70 / hr ekhangela i-intanethi ukugcina i-25. Ukuba bachitha iyure bethenga kwi-Intanethi ngexabiso ngexabiso eliphezulu kumshicileli omtsha, ulahlekelwe nje yi- $ 15. Endaweni yokuba ubuya kuthenga iprinta yokuqala oyifumeneyo kwaye uthengise iinkonzo zomqeshwa nge $ 70. Ngewenze ngaphezulu kwe- $ 15.
Kutheni ngaphezulu? Kungenxa yokuba ukukroba i-Intanethi ukuzama ukugcina iirandi ezimbalwa kwiprinta iyabamba kwaye yayingeyiyo into umqeshwa wakho awayeqeshelwe ukuyenza. Bebengathanda ukuba basebenze kwiprojekthi yabo, kwaye ubuya kuba ngcono ukuba bebeyenzile. Ngebezidibene neenjongo zabo, befike ngexesha, kwaye bekhazimlisiwe kubugcisa babo.
Ungaze Ubheje ubuncinci
Xa ndanditshatile, ndaya eLas Vegas kunye noLaughlin kunye nomfazi wam. Andizange ndingcakaze, kodwa abazali bakhe babenjalo. Ingcebiso kaMama wakhe kum yayihlala ibheja ubuninzi. Ndihleli ixesha elide ndidlala ividiyo emnyama kunye nevidiyo poker ngobusuku obunye kwaye ndalahla i $ 1.25 ngexesha. Ayivakali ngathi ininzi, kodwa bendikumkhosi waselwandle ngelo xesha ngoko ke bendingenamali ingako. Ndicinga ukuba 'uhlahlo-lwabiwo mali lokungcakaza' lwaluyi- $ 30 nganye ngosuku.
Emva kwethutyana, ndithe xa ndibona umphantsi webhakethi lam, ndaqala ukufaka iikota ezi-4 ngexesha .. ndaphinda ndayi-3… ndaza ndayi-2… ndaza ndayi-1… ndaza ndayibetha iRoyal Flush. Umamazala wam wandonwabisa-de wabona intlawulo ye- $ 62.50. Umhlathi wakhe wehla. Ukuba bendiqhubekile ne- $ 1.25 yam, bendiya kuba malunga ne-25,000 yeedola. Endaweni yoko, bendinenye ibhakethi lokuhlala.
Ndifunde isifundo sam.
Ukusasaza ukubheja kwakho
Kumsebenzi wam wangoku, kufanelekile ukuba ndibukele kwaye ndibabone abatyali mali kwishishini kwaye yayivula amehlo. Abatyali mali bethu abakhuphelanga mali kwiiakhawunti zabo zokonga kunye nemali kwimhlala phantsi ukuze badlale ngathi. Endaweni yoko, batyale imali kwiinkampani ezili-10 kwaye balungelelanisa ingqalelo yabo ngokufanelekileyo. Abakhange batyale lonke ixesha kunye nemali yabo kwishishini elinye benethemba, bethandaza, kwaye becinezela ukuba liza kuyenza.
Bayisasaza imali yabo kumashishini alishumi kwaye bafuna ukunceda ishishini ngalinye ngokubanceda apho banakho. Abanye babatyali mali bethu banikezela ngengxelo nje ngokungathi ngabathengi. Ezinye zibonelela ngezemali kwaye ezinye zibonelela ngengxelo yobuchwephesha. Bayayiqonda indlela amandla abo anokusetyenziswa ngayo kwishishini ngalinye kwaye bahlule ngokufanelekileyo. Ndothukile ndimangalisiwe njengoko besixelela ukuba sivuthele i $ 25k apha kunye ne- $ 25k phaya ngokungathi akukho nto. Kungenxa yokuba is akukho nto.
Bafuna ukuba sibheje ngeyona max kwaye sigxile kwishishini, hayi kwiakhawunti yokonga.
Ngamanye amagama, abathengisi umshicileli wexabiso eliphantsi kwaye abafuni ukuba sibe njalo.
tags: ukulandelela umnxebaxhumaShishiniimikhwaisigqibo sokuthengathenga uphandouphandoumthengisiisabeloiindlela zokuthenga
Mar 3, 2008 ngo 11:22 PM
Ukuntywila ebukhosini kwi-Black Jack, sisihogo sesandla eso!
Ngendlela uDoug, ndizamile ukunqakraza i-permalink kwesi sithuba kwi-RSS feed kwaye ndafumana "Asikwazanga ukuyifumana loo nto! Nokuba ulahlekile okanye thina silahlekile! ” umyalezo. Andiqinisekanga ukuba kwenzeka ntoni, kodwa bendicinga ukuba ungathanda ukwazi.
Mar 3, 2008 ngo 11:35 PM
Yhu! Uyilibele 'nevidiyo hayibo'. Isimanga kukuba ndibethe ku-Keno phezolo ndahlawula uhambo. Ndikhumbula enye i-jackpot enkulu. Kwaye kwisikhululo seenqwelomoya ndaphoswa yenye i-jackpot. Ndityebile maxa wambi!
Re: I-RSS-bendinomcimbi xa ndiqala ukupapasha. Ndacinga ukuba ayipapashanga kwaye ndiyilungisile iposi slug. Ndingumntu ophumeleleyo ngokuhlwanje! 😉
Mar 4, 2008 ngo-9: 30 AM
UDoug-Ndiyavuma ukuba ixesha liyimali kwaye ukuchitha iyure ukhangela elona xabiso lilungileyo kuyinkcitho. Nangona kunjalo, andicingi ukuba oko kuthetha ukuba uthenge owokuqala oyibonayo ngalo naliphi na ixabiso. Ukuba kundithatha imizuzu emihlanu ukufowunela iBestBuy.com, CircuitCity.com, Amazon.com kunye neNewEgg.com ukubona elona xabiso libalaseleyo, kulifanele ixesha kum.